Taageero dhaqaale
Tacliinta Sare ee Sweden dhexdeeda waa bilaash oo wax qarash ah lagama qaadayo muwaadinniinta wadamada EU/EES ama Switzerland. Shaqsiyaadka degnaansha ku leh Sweden sababo aan ka ahayn waxbarasho ayaa iyaguna sidoo kale bilaash u ah qarashka lagu barto. Tacliinta shahaadada ugu sareyso qof kasta waa u bilaash.
Adiga arday ahaan, weli waxaad u baahnaan doontaa lacag aad isaga bixiyo qarashka qutul-yoonka, sida cuntada, hoyga iyo qoraallada koorsada iwm. Dariiqa ugu caamka ah oo ay ardayda kaalmo ku hali karaan inta lagu jira waxbarashadooda ayaa ah in deeq waxbarashada ay ka dalbadaan Guddiga Qaranka ee Kaalmada Ardayda (Centrala studiestödsnämnden, CSN). Kaalmada ardayda waxay ka kooban tahay deeqda ardayda oo aan lagaaga baahnayn in aad dib u bixiso iyo daynta ardayda oo la iska doonayo in dib loo bixiyo. Waxaad dalban kartaa oo kaliya deeqda haddii aad leedahay dhaqaale kale. Kaalmo waad u heli kartaa haddii waxbarashadaada ay tahay [part-time].
Kaalmada loogu talagalay waxbarashada jaamacadda waxaa la heli karaa ugu badnaan 240 todobaad. Kaalmada ardayda waxaad heli kartaa ilaa iyo aad ka gaarto da'da 56 sanno jir, laakin xuquuqda in aad lacag ammaahsan karto waxay ku eg tahay maalintii ay 47 sanno kuu gasho.
Xaq u yeelashadaada kaalmada ardayda wax saamayn kuma yeellan doonto inta lacag ee koontada bangiga kugu jiro ama daqliga qoyskaaga soo gasha. Hase-yeeshee, xad ayaa jira oo ah inta lacag ee aad kasban karto inta lagu jiro kaalandarka nus ee sannadkii inta aad ku jirto waxbarashada ka hor inta aysan saamayn ku yeellan kaalmada ardayda ee ay dhici karta in aad hesho. Uma baahnaan doonto in aad noo fidiso nooc kasta damaanad ah ee dayntaada ah, laakin samister kasta waa in aad keentaa buundooyinka gaar ah si aad kaalmada ardayda aad u hesho.
Xeerar gaar ah ayaa ku qabanaya haddii aadan haysan dhalashada Swedish ka. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee CSN's waa www.csn.se.
Dib u bixinta daynta
Dib u bixinta daynta waxay kuu bilaabmaysaa lix bilood ka dib marka waxbarashada ay kuu dhammaato markii ugu dambaysay ee daynta lagu siiyay. Lacagta aad dib u bixinayso waxay ku xiran tahay inta lacag ee aad ammaahatay, sicirka dulsaarka iyo da'daada. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dib u bixinta waxaad ka heli karaa CSN' boggeeda internetka.
Deeqda-waxbarashada iyo qarashka hoyga
Wadankan Sweden, ma jiro deeq-waxbarasho oo badan oo ay dalban karaan ardayda ku jira tacliinta waxbarashada, deeqada waxbarashada ee jirtana ma ahan mid ku filan qofka inuu masaruufto. Xaqiiq dii, ardayda reer Sweden kaalmada ardayda ayay qaataan halka ay ka qaadan la'haayeen deeq-waxbarasho. Maktabbadaha dadwaynaha ayaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan halka deeq-waxbarasho aad ka dalban karto. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa studera.nu.
Ardayda looga baahan yahay in ay iska bixiyaan lacagta waxbarashada ee wadankan Sweden waxay dalban karaan deeq-waxbarasho iyagoo u mara Swedish Institute, iyo jaamacaddaha iyo kulliyaddaha jaamacaddaha. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa Studyinsweden.se.
Haddii aad tahay waalid leh carruur ay da'doodu udhaxayso 18 iyo 28 sanno jir oo daqligoodana hooseeyo, waxaad dalban kartaa lacagta hoyga. Macluumaad badan waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee Xafiiska Caymiska Bulshada ee [Swedish Social Insurance Office] oo ah www.forsakringskassan.se.
Shaqada inta waxbarashada ay socoto
Waxaa muhiim ah in aad xusuusato in waxbarashada ay waqti u baahan tahay. Waxbarashada waqtiga buuxa ah [full-time] waxay la mid tahay sida adiga oo shaqeeya shaqo waqti-buuxa ah, tusaale ahaan, todobaadkiiba 40 saacaddood. Ardayda qaar waxay shaqeeyaan waqti nus ah inta ay waxbarashadoodu ku jiraan; hase-yeeshee, goorta aan fasalka lagu jirin, waqtigaaga badankiisa waa in aad gelisaa in iskaaga ama asxaabtaada aad isla dhigataan aad isla barataan casharka la idin siiyay.
Miisaaniyadda soo socda ee loogu talagalay ardayda labka ah iyo kuwa dheddigga ah waxaa isku soo ururiyay Hay'adda Macmiilka ee Swedish [Swedish Consumer Agency] (Konsumentverket). Kuwan waa qiyaas kaliya; qof kasta wuxuu leeyahay karti uu ku kaydsado waxyaabo kala duwan, tusaale ahaan cunto. fadlan ogsoonow in waxyaabaha ku kaca ay caado ahaan in magaalooyinka wa wayn sida Stockholm ama Gothenburg ay aad uga badnaan karto, oo ayna jirto in meelaha fog ee Sweden dhexdeeda ah ay ka sii yaraan karto.
Qiyaasaha la soo qaatay ee bishiiba oo Swedish kronor ah (SEK).
Cuntada 2,380 1,790
Nadaafadda shaqsi 380 510
Dharka iyo kobaha 590 600
Waqti-firaaqada 620 620
Telefoonka gacanta 230 230
Agabyada sida xaashida musqusha, iwm 100 100
Isgaarsiinta, oo ay ku jiraan internetka iyo shatiga TVga 600 600
Caymiska guriga 90 90
Kirada 3,500 3,500
Korontada 250 250
Buuggaagta iskuulka iyo suugaanta 750 750
Gaadiidka dad-weynaha 510 510
Isu-geyn 10,000 9,550